JPN 600 (သို့မဟုတျ) ဂပြနျကလာတဲ့ သကျတျောစောငျ့? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
?JPN 600 (သို့မဟုတျ) ဂပြနျကလာတဲ့ သကျတျောစောငျ့?
လူငယျတှအေတှကျ အသညျးကှဲတာက ရှောငျဖို့မလှယျတဲ့ အရာတဈခုဆိုရငျ လူကွီးတှအေတှကျ ရှောငျဖို့သိပျမလှယျတာ သှေးတိုးရောဂါပါပဲ။
သှေးပေါငျခြိနျ 135/80 mmHg နဲ့ အထကျမှာအမွဲရှိနရေငျ သှေးတိုးရောဂါရှိနပွေီလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ နှလုံးရောဂါ..လငေနျးနဲ့ ကြောကျကပျရောဂါ စတဲ့ ကွောကျစရာ ပွဿနာတှေ ဆကျဖွဈနိုငျတာမို့ သိပျအန်တရာယျမြားပါတယျ။
?ဘာလို့ အိမျမှာသှေးပေါငျခြိနျစကျရှိသငျ့တာလဲ ??
သှေးတိုးရောဂါတကယျရှိမရှိ ဆုံးဖွတျဖို့ အိမျမှာတိုငျးတဲ့ Home Blood Pressure Monitoring က သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ သှေးပေါငျခြိနျဆိုတာ အခြိနျနဲ့ အမြှ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ပွောငျးလဲတတျပါတယျ။
?Masked Hypertension ဆိုတဲ့ အခွအေနတေဈခုရှိပါတယျ။
အိမျမှာသှေးပေါငျအမွဲတကျနပေမေဲ့ ဆေးရုံ ဆေးခနျး ဆေးဆိုငျတှမှောခြိနျတဲ့အခါ သှေးပေါငျသိပျမတကျဘဲ မာယာမြားနတေတျတယျ။ ဒီတော့ အသံတိတျ လူသတျသမား သှေးတိုးရောဂါကို ရှိရကျနဲ့ မမိနိုငျဘဲ လှတျနတေတျပါတယျ။
?White Coat Hypertension ဆိုတဲ့ အခွအေနလေညျးရှိပါတယျ။
ဆေးရုံဆေးခနျး ဆရာဝနျရှရေ့ောကျမှ စိတျလှုပျရှားပွီး သှေးတှတေိုးသှားတတျပါတယျ။ ဒီတော့ တကယျသှေးတိုးရောဂါမရှိဘဲ ဆေးတှသေောကျနရေပွီး ဆေးရဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ ခံနရေတတျပါတယျ။
ဒီအခွအေနတှေကေို ပွလေညျစဖေို့နဲ့ သှေးတိုးဝငျလာရငျစောစောသိရှိ ကာကှယျဖွရှေငျးနိုငျဖို့ အိမျမှာ သှေးပေါငျခြိနျစကျတဈလုံး ရှိဖို့လိုပါတယျ။
ပုံမှနျခြိနျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ သှေးတိုးကဆြေး သောကျနရေသူတှအေတှကျလညျး ဆေးပမာဏ ထိနျးညှိဖို့ အိမျမှာ နစေ့ဉျသှေးပေါငျခြိနျဖို့ လိုပါတယျ။
?ဘာလို့ Omron ကိုမှ ရှေးခယျြသငျ့တာလဲ ??
Omron အိမျသုံးသှေးပေါငျခြိနျစကျတှကေို ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ သှေးပေါငျခြိနျစကျ အလုံးရသေနျး ၁၀၀ကြျော.. ၂၀၁၃ မှာအလုံးရသေနျး ၁၅၀ ကြျောနဲ့.. ၂၀၁၆ မှာအလုံးရသေနျး ၂၀၀ကြျော အထိရောငျးခခြဲ့ရပွီး ကမ်ဘာ့ အိမျသုံးသှေးပေါငျခြိနျစကျဈေးကှကျမှာ ရှယျယာအမြားဆုံး ကမ်ဘာနံပါတျ ၁ နရောကိုရရှိထားပါတယျ။
?ဘာလို့ JPN 600 ကိုရှေးရမလဲ
အရညျအသှေးနဲ့ ပတျသတျရငျအမွဲ စိတျခရြတဲ့ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ထုတျတယျဆိုတဲ့ အခကျြတဈခုတညျးနဲ့တငျ JPN 600 ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက သိပျမေးခှနျးထုတျစရာ လိုမယျမထငျပါဘူး။
JPN-600မှာ ပါဝငျတဲ့ featuresတှကေတော့
? Cuff Wrapping Guide
လကျမောငျးအပတျ နရောတကမြှနျမှနျကနျကနျ ‘ok’ဖွဈမဖွဈ ပွပေးတာမို့ အဖွတှေကေ မှနျကနျတိကြ ယုံကွညျရပါတယျ။
? Body Movement Detection
သှေးပေါငျခြိနျနစေဉျ ခန်ဓာကိုယျလှုပျရှားမှုတဈခုခုကွောငျ့ အဖွမှေားယှငျးသှားလြှငျ စကျက သိရှိပွီး ပွနျတိုငျးစပေါမယျ။
?Blood Pressure Level Indicator
သှေးပေါငျခြိနျ အဖွကေို ကိနျးဂဏနျးနဲ့ ပွရုံမက သှေးတိုးမတိုးကိုပါ American Heart Association ရဲ့ Guidelines အရ အဖွထေုတျပေးမယျ။
နှလုံးခုနျနှုနျးနဲ့ နှလုံးခုနျသံ မှနျမမှနျကိုပါ ထောကျလှမျး အဖွထေုတျနိုငျမယျ။
? IntelliSense Technology
ိုလပွေနျထုတျခြိနျမှာလညျး ပိုမွနျစလေို့ အခြိနျတိုအတှငျး တိကတြဲ့သှေးပေါကျခြိနျကို အဖွမွေနျမွနျထုတျပေးနိုငျပါတယျ။
?အဖွပေေါငျး ၉၀ အထိ ရကျစှဲ အခြိနျ အတိအကြ မှတျတမျးတငျ သိမျးထားနိုငျမယျ။
? ၁၀မိနဈ အတှငျးတိုငျးထားတဲ့ နောကျဆုံးအဖွသေုံးခုရဲ့ ပမျြးမြှအဖွကေို ထုတျပေးနိုငျတယျ။
?Guest Mode ပါလို့ ဘယျသူယူသုံးသုံး သှေးပေါငျခြိနျမှတျတမျးကို မရောထှေးစဘေူး။
ဂပြနျကလာတဲ့ သကျတျောစောငျ့လေး JPN 600 နဲ့ အတူ အသံတိတျလူသတျသမားသှေးတိုးရောဂါရဲ့ အန်တရာယျကို ရငျဆိုငျကြျောလှားနိုငျကွပါစေ…။
?JPN 600 (သို့မဟုတ်) ဂျပန်ကလာတဲ့ သက်တော်စောင့်?
လူငယ်တွေအတွက် အသည်းကွဲတာက ရှောင်ဖို့မလွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုရင် လူကြီးတွေအတွက် ရှောင်ဖို့သိပ်မလွယ်တာ သွေးတိုးရောဂါပါပဲ။
သွေးပေါင်ချိန် 135/80 mmHg နဲ့ အထက်မှာအမြဲရှိနေရင် သွေးတိုးရောဂါရှိနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နှလုံးရောဂါ..လေငန်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ စတဲ့ ကြောက်စရာ ပြဿနာတွေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တာမို့ သိပ်အန္တရာယ်များပါတယ်။
?ဘာလို့ အိမ်မှာသွေးပေါင်ချိန်စက်ရှိသင့်တာလဲ ??
သွေးတိုးရောဂါတကယ်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အိမ်မှာတိုင်းတဲ့ Home Blood Pressure Monitoring က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ဆိုတာ အချိန်နဲ့ အမျှ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
?Masked Hypertension ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။
အိမ်မှာသွေးပေါင်အမြဲတက်နေပေမဲ့ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ဆေးဆိုင်တွေမှာချိန်တဲ့အခါ သွေးပေါင်သိပ်မတက်ဘဲ မာယာများနေတတ်တယ်။ ဒီတော့ အသံတိတ် လူသတ်သမား သွေးတိုးရောဂါကို ရှိရက်နဲ့ မမိနိုင်ဘဲ လွတ်နေတတ်ပါတယ်။
?White Coat Hypertension ဆိုတဲ့ အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။
ဆေးရုံဆေးခန်း ဆရာဝန်ရှေ့ရောက်မှ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး သွေးတွေတိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တကယ်သွေးတိုးရောဂါမရှိဘဲ ဆေးတွေသောက်နေရပြီး ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံနေရတတ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကို ပြေလည်စေဖို့နဲ့ သွေးတိုးဝင်လာရင်စောစောသိရှိ ကာကွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အိမ်မှာ သွေးပေါင်ချိန်စက်တစ်လုံး ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ပုံမှန်ချိန်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သွေးတိုးကျဆေး သောက်နေရသူတွေအတွက်လည်း ဆေးပမာဏ ထိန်းညှိဖို့ အိမ်မှာ နေ့စဉ်သွေးပေါင်ချိန်ဖို့ လိုပါတယ်။
?ဘာလို့ Omron ကိုမှ ရွေးချယ်သင့်တာလဲ ??
Omron အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စက်တွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ သွေးပေါင်ချိန်စက် အလုံးရေသန်း ၁၀၀ကျော်.. ၂၀၁၃ မှာအလုံးရေသန်း ၁၅၀ ကျော်နဲ့.. ၂၀၁၆ မှာအလုံးရေသန်း ၂၀၀ကျော် အထိရောင်းချခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့ အိမ်သုံးသွေးပေါင်ချိန်စက်ဈေးကွက်မှာ ရှယ်ယာအများဆုံး ကမ္ဘာနံပါတ် ၁ နေရာကိုရရှိထားပါတယ်။
?ဘာလို့ JPN 600 ကိုရွေးရမလဲ
အရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်အမြဲ စိတ်ချရတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် JPN 600 ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က သိပ်မေးခွန်းထုတ်စရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
JPN-600မှာ ပါဝင်တဲ့ featuresတွေကတော့
လက်မောင်းအပတ် နေရာတကျမှန်မှန်ကန်ကန် ‘ok’ဖြစ်မဖြစ် ပြပေးတာမို့ အဖြေတွေက မှန်ကန်တိကျ ယုံကြည်ရပါတယ်။
သွေးပေါင်ချိန်နေစဉ် ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကြောင့် အဖြေမှားယွင်းသွားလျှင် စက်က သိရှိပြီး ပြန်တိုင်းစေပါမယ်။
သွေးပေါင်ချိန် အဖြေကို ကိန်းဂဏန်းနဲ့ ပြရုံမက သွေးတိုးမတိုးကိုပါ American Heart Association ရဲ့ Guidelines အရ အဖြေထုတ်ပေးမယ်။
နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ နှလုံးခုန်သံ မှန်မမှန်ကိုပါ ထောက်လှမ်း အဖြေထုတ်နိုင်မယ်။
ိုလေပြန်ထုတ်ချိန်မှာလည်း ပိုမြန်စေလို့ အချိန်တိုအတွင်း တိကျတဲ့သွေးပေါက်ချိန်ကို အဖြေမြန်မြန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
?အဖြေပေါင်း ၉၀ အထိ ရက်စွဲ အချိန် အတိအကျ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းထားနိုင်မယ်။
? ၁၀မိနစ် အတွင်းတိုင်းထားတဲ့ နောက်ဆုံးအဖြေသုံးခုရဲ့ ပျမ်းမျှအဖြေကို ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
?Guest Mode ပါလို့ ဘယ်သူယူသုံးသုံး သွေးပေါင်ချိန်မှတ်တမ်းကို မရောထွေးစေဘူး။
ဂျပန်ကလာတဲ့ သက်တော်စောင့်လေး JPN 600 နဲ့ အတူ အသံတိတ်လူသတ်သမားသွေးတိုးရောဂါရဲ့ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ…။